မာရိသညျ devstvenitsey ကျန်ရစ်သညျယရှေုကိုဘွားမြင်လေ၏? | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
ဟုတ်ကဲ့မာရိသညျ nepopochna ။ သူမသည် yaleniyah Lourdes သန့်ရှင်းသောအ Bernaendette Soubirous ၌ဤအတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။ ထိုအ saz -quot; ငါကညာ zachatiequot ဖြစ်၏။ ထိုအချိန် မှစ. လူအားလုံး၏သူမကသူမ၏ခင်ပွန်းမသိမမှတ်ဘဲ, တစ်အံ့သြစရာလမ်းကိုကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖို့မူလကအပြစ်တရားကို၎င်း, ဘုရားသခင်၏သားတော်မပါဘဲဖြစ်ခဲ့သည်။ ။ ကိုယ့်မင်္ဂလာကက်သရင်း Emmerich stigmatichki vizionerki- အမှတ်တရများ၏စာအုပ်ထဲတွင်အခန်းပေါင်းဖတ်နေတစ်ဥမင်ထဲမှာ Vifliemskoy unearthly တောက်နှင့်သူငယ်ကိုယ်တိုင်ကအပေါ်သန့်ရှင်းသောဘုရားဗာဂျင်း၏လက်၌ရှိ၏ထင်ရှား။ , သူမသည်ပဋိသန္ဓေနှင့်သာမန်အမျိုးသမီးတစ်ဦးအဖြစ်မွေးဖွားဘူး။ ဤအမှုအလုံးစုံကိုဘုရားသခငျဘာမျှမဖြစ်နိုင်တာသည်အံ့ဖွယ် sposobom.Ved ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ ထိုသို့ကျမ်းစာထဲမှာမဖြောင့်မယ့်ဖော်ပြထားသည်။ ထိုအခါကျောက်ဆောင်ကနေရေနှင့်ပင်လယ်ပေးသည် Way ကိုပေးသနား။ ဒါကြောင့်ဒီကက်သလစ်ဘုရားကျောင်းသည်တရားသေအယူဝါဒဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်စစ်မှန်တဲ့။
အဘယ်သူမျှမအကြွင်းအကျန်။ ထို့ကြောင့် sleduyushego ကိုထမ်းမရှိတော့အဓိပ္ပာယ်စေခဲ့သည်။
ဟုတ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်ဘာသာရေးနှင့်တစ်ယူသန်ဆန်တဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ မာရီယာ Quote ယောက်ျားကိုဘွားမြင်လေ၏; ခင်ပွန်းမရှိဘဲအမြိုးအနှယျ (ဆိုလိုသည်မှာ။ ) Muzhchinyquot; ကမျြးစာ၌ကျမ်းစာလာသည်ကား။ တမန်တော်နှင့်ဧဝံဂေလိဆရာလုကာသူမသားတော်ကိုကိုထမ်းမယ်လို့သူမ၏တင်းကိုကြားပြောသောအပျိုစင်မာရိဖို့ကောငျးကငျတဂါဗြေလ၏အသွင်အပြင်နှင့်ပတ်သက်ပြီးရေးသားခဲ့သည်။ မာရိသညျ replied ထားတဲ့ရန်: Quote; kako ဒီက, ငါသူမ၏ခင်ပွန်း idezhe Quote မသိရပါဘူး ;? ငါတစ်လူနှငျ့အတူရှိခဲ့ဖူးလျှင်ဖြစ်နိုင်ပုံကိုကားအဘယ်သူနည်း ကြောင်းမှာကောငျးကငျတမနျ Quote, သူမ၏ပြောသည်; သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်သင့်အပေါ်သို့ရောက်လိမ့်မည်ကို၎င်း, အမြင့်ဆုံး၏တန်ခိုးသည်သင့်ကိုလွှမ်းမိုးလိမ့်မည် အကြောင်းပြချက်သည်သန့်ရှင်းသောသားတော် Bozhimquot ;. ဟုခေါ်တွင် (လုကာ, gl.1, stt.26-38 ။ ) ။ ယင်းပရိုများအတွက်သတင်းအချက်အလက်, ငါငယ်စဉ်ကလေးဘဝကတည်းကသူမအိမ်မထောင်ဘဲနေခြင်း၏သစ္စာခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကြောင်းမှတ်သားချင်တယ်, ယောသပ်သည်, သူမလက်ထပ်ရှိသောအကြင်မခံခဲ့ရနှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောအရာဖြစ်ကြ၏။ ဟုတ်ကဲ့, ယောသပ်ကြောင်းအသက်အရွယ်အတွက်မဟုတ်တော့ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့သခင်ယေရှု၏ညီအစ်ကို, ညီအစ်မအကြောင်းပြောဆိုလျှင်, ယခင်လက်ထပ်ထိမ်းမြားထံမှယောသပ်၏အမြိုးသားအကြီးနှင့်ကလေးများဝမ်းကွဲမာရိသညျညီအစျမ။
ဒါဟာပြတ်ပြတ်သားသားဖြေကြားမရနိုငျ, ငါ့ကိုရန်ပုံရသည်။ ကျနော်တို့ကဇီဝြဖစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးသက်သက်သာစကားပြောလျှင်, hymen ကလေးမွေးဖွား၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်မည်သူမဆိုအတွက်ကိုက်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန် မှစ. သူမယောက်ျားနဲ့အဆက်အသွယ်သို့ လာ. , စှာစငျကွကျန်ရစ်ဘူး။
62 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,540 စက္ကန့်ကျော် Generate ။